Debian anopemberera makore makumi maviri nemanomwe achive chimwe chemasimba akakurisa | Linux Vakapindwa muropa
Kana isu tichifanira kutaura zvine simba zvakanyanya kugoverwa kweLinux munhoroondo, pasina kupokana hatigone kutadza kutumidza zita rekuti Debian. Nhasi Nyamavhuvhu 16 inoratidza mucherechedzo wechi27 wezuva iro mudzidzi wePurdue University Ian Murdock akazivisa kuvhurwa kwayo.
27 makore aDebian. Ndiwo matangiro azvakaita
Musi waAugust 16, 1993 Ian Murdock akaburitsa chinyorwa chinotevera
Uku ndiko kuzivisa kuburitswa kuri kuuya kweshanduro nyowani yeLinux iyo yandinodaidza kuti Debian Linux. Iyi ndiyo vhezheni yandakagadzira zvisingaiti kubva pakutanga; mune mamwe mazwi, ini handina kungoita shanduko kuSLS (Softlanding Linux System) ndokuidaidza kuburitswa kutsva. Zvakauya kwandiri kuti ndizvigadzire mushure mekumhanya SLS uye kazhinji ndisingagutsikane nezvakawanda zvacho uye mushure mekugadzirisa zvakawanda kuSLS ndakafunga kuti zvingave nyore kutanga kubva pakutanga. Iyo base system iko zvino yave kuda kukwana (kunyangwe ini ndichiri kutarisa kuti ndive nechokwadi chekuti ndawana zvinyorwa zvechizvino zvese), uye ndinoda imwe mhinduro ndisati ndawedzera izvo "zvinoshamisira" zvinhu.
Ndokumbira utarise kuti kuburitswa uku hakusati kwapera uye kunogona kusave kwemamwe mavhiki akati wandei; zvisinei ini ndaifunga kuti ndaizotumira izvozvi kuti ndikwezve vamwe vanhu. Kunyanya, ndiri kutsvaga:
1) Mumwe munhu anozopedzisira achida kunditendera kuti ndiise kugovera kune yavo isingazivikanwe ftp saiti. Ndokumbira undibate. Ini ndinokuyambira kuti ichave yakakura kwazvo.
2) Makomendi, mazano, mazano, nezvimwe. kubva munharaunda yeLinux. Uyu ndiwo mukana wako wekuratidza chaiwo mapakeji, akateedzana, kana chero chaunoda kuwona sechikamu chekuburitswa kwekupedzisira.
Usafunge kuti nekuti pasuru iri muSLS inozofanira kuverengerwa muiyo Debian vhezheni! Zvinhu zvakaita ls uye kati zvakapihwa, asi kana paine chimwe chinhu muSLS chausingakwanise kurarama pasina, ndokumbira undizivise.
Gare gare inosimbisa zvinangwa zveprojekti
Debian ichave yakapfava uye yakatetepa. Hapasisinazve mabhinari kana akawanda murume mapeji
Debian ichave iine yakanyanya kukwiridzira-kune-ese ezvese. Zvichava nyore kuchengeta iyo system up-to-date neiyo "yekuvandudza" script mune yepasi system iyo inobvumidza izere kusangana kweyekuvandudza mapakeji.
Debian ichave iine maitiro ekumisikidza ayo asingazoda kutarisirwa; Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuisa iyo base disk, teedzera mamwe ese ma disks kubva kugovera kune yako hard disk, pindura mibvunzo mishoma nezve mapakeji iwe aunoda kana iwe ausingade kuisa, uye rega muchina ugove kugovera apo unoita zvinonakidza zvinhu.
Debian ichave iine system yekugadzirisa maitiro iyo ichaedza kumisikidza zvese kubva fstab kuenda kuXconfig.
Debian ichaita kuti Linux ive nyore kune vashandisi vasina mukana weInternet. Vashandisi vasina Indaneti vanozove nesarudzo yekugamuchira nguva nenguva yekuvandudza mapakeji ekushandisa kune yavo system. Vachavewo nesarudzo yekusarudza kubva kuraibhurari hombe yemamwe mapakeji ayo asingazobatanidzwe mudhatabhesi rehurongwa.
Debian ichave yakanyanya kunyorwa
Pane iyo Debian saiti pane tsananguro yakanaka kwazvo muchiSpanish nezve nhoroondo uye zvinangwa zveDebian chirongwa. Sezvo ini ndisingakwanise kuwedzera chero chinhu chakakosha pairi, zvandinogona kuita kukukoka iwe kuti uverenge.
Kana ini ndichienda kunotaurira izvo zvisingaonekwi panguva yezvakaitika.
Muna 2014, imwe yehurukuro idzi dzakakanganiswa zvikuru nenharaunda dzakaburitswa munharaunda yeDebian yesoftware yemahara. Mune ino kesi, iyo nyaya yekukakavara yaive yekuvhota pane yekushandisa senge yekutanga system. MuLinux, iyo boot system ndiyo maitiro anotanga nekukurumidza mushure meiyo kernel mitoro uye iri basa rekutanga mamwe maitiro anobvumidza iyo yekushandisa system kuti ishandiswe.
Vazhinji vagadziri havana kufarira kuti iye akasarudzwa sistemd, chidimbu che software iyo vatsoropodzi vayo vanoona seyakaomarara, kusaremekedza maitiro akagamuchirwa enharaunda nenharaunda uye anogona kuita sarudzo yega.
Nekudaro, nhengo dzinoverengeka dzemunharaunda dndakafunga kupatsanura ndogadzira imwe chirongwa chinonzi Devuan
Devuan inouya mune desktop desktop (XFCE, MATE, Cinnamon, LQxt, uye KDE). Iyo zvakare ine vhezheni yemaseva uye inosimudza kubva kunetiweki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Debian anopemberera makore makumi maviri nemanomwe ari ekugovana kwakanyanya
Ini handifunge kuti vanofanirwa kuve imwe yemasimba anogoverwa, kunyangwe tichida kana kuti kwete iyo yakakurisa distro yave iri, uye ichave iri Ubuntu, kana pasina debian paisazove neUbuntu, nekuti Ubuntu hwakavakirwa padiki , asi usati wabva kuUbuntu Ndiani Waiziva Debian kana Linux zvakawandisa?, Linux, tingaida kana kwete, ane chikwereti Ubuntu hafu yeupenyu, sezvo Ubuntu yakaita vanhu vazhinji kutanga paLinux uye pawakatanga ipapo iwe waiziva unofanirwa, fedora, nezvimwewo, ndizvo zvakaita uye hazvisi zvekudzivirira Ubuntu izvo zvandisingatombo shandisa, ini ndinoshandisa fedora uye manjaro, asi zvazviri, ndizvo
Robert Scattini akadaro
Ini ndinofunga kuti sekuenderera unenge uri mukana wakanaka kutaura nezve devuan zvakare, iyo mwedzi yakati wandei yapfuura yakaburitsa vhezheni yayo 3 "Beowulf", kwavakawedzera iko kushandiswa kwe runit uye openrc senzira. Iyo purojekiti inoita kunge yakura zvakanyanya.
Pindura kuna Roberto Scattini
Ini ndinofunga kuti sekuenderera unenge uri mukana wakanaka kutaura zvakare nezvaDevuan, uyo mwedzi yakati wandei yapfuura akaburitsa vhezheni yake 3 "Beowulf", kwavakawedzera kushandiswa kwe runit uye openrc senzira. Iyo purojekiti inoita kunge yakura zvakanyanya, ini ndirikutanga kuishandisa zvakanyanya mumaseva chaiwo ane mabasa echipiri.
Wako waunogovana navo ongororo vane chokwadi chekutora zano rako.
Nyaya inonakidza zuva rekuzvarwa ndinofanira kunge ndanga ndichishandisa tii kwemakore manomwe?
Makorokoto. Debian, ndicho chinhu chakanakisa chakamboitika kwandiri. Ini ndaiziva nezvekugovaniswa makore apfuura uye pano ini ndinazvo. Rarama kwenguva refu Debian
Iyo PineTab inononoka kune imwe vhiki uye inogona kuiswazve bhuku pakupera kwaAugust, pakati pezvimwe PINE64 nhau